PressReader - Isolezwe: 2017-09-14 - Izinhlelo zokunqanda ukubulawa kobhejane
Izinhlelo zokunqanda ukubulawa kobhejane
Isolezwe - 2017-09-14 - IZINDABA - KHULEKANI MASEKO EseDrakensberg
KUQINISWE izinhlelo zokunqanda ukubulawa kobhejane kulesi sifundazwe, nokuthiwa kuhlelwa ngongqondongqondo iningi labo abaqhamuka ezifundazweni iMpumalanga neGauteng.
Lokhu kuvezwe nguNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nokongiwa kweMvelo, KwaZulu-Natal uMnuz Sihle Zikalala ngesikhathi kunomzungezo nabezindaba esiqiwini iSpionkop, oKhahlamba ngoLwesibili. Lo mzungezo ubuhlelwe yilo mnyango ubambisene nabe-Ezemvelo KNZ Wildlife kanti bekuhloswe ngawo ukuzocacisa ngezinhlelo esezenziwe ukuzama ukunqanda lesi sihlava.
Uthe sekwengezwe isibalo sonogada abangu-18 abatshalwe eziqiwini ezingu-10 KwaZulu-Natal.
“Sikholwa ukuthi akekho umuntu ongasuka eMpumalanga noma eGauteng azobulala obhejane kungekho axhumana nabo abakulesi sifundazwe. Yingakho sesiqinise ubudlelwano phakathi kwabakweZemvelo KZN Wildlife nemiphakathi ehlala ezindaweni ezisondelene neziqiwi,” kusho uZikalala.
Uthe isivumelwano sokusebenzisana sisayinwe nomphakathi ohlala eNdumo, kwaTembe, Okhukho, kwaHlabisa, eMpukunyoni ukubala izindawo ezimbalwa.
Uphinde waveza ukuthi sekuzoba nezinkantolo ezizobhekelela amacala aphathelene nokubulawa kobhejane.
Kuvele ukuthi abakwa-Ezemvelo Wildlife sebevele baluqalile uphenyo lwabo lwangaphakathi ngokubulawa kobhejane okuholele ekutheni kuxoshwe izikhulu ezimbili okusolakala ukuthi ziyathinteka ebugebengwini balolu hlobo.
Ngo-2016, bebengu-501 obhejane abamnyama KwaZulu-Natal kanti isibalo sabo sikhula ngo 1.33% uma kuqhathaniswa nobhejane abamhlophe, bona ngo-2016 okuthiwa bebengu-2865.
Isibalo sokubulawa kobhejane abamhlophe ngo-2016 besingu- 4.49% kuqathanisa no-2.40% wesokubulawa kwabamnyama.
UMnuz Cedric Coetzee obhekelele ezokuphepha kwe-Ezemvelo KZN Wildlife, uthe bangu-95 obhejane ababulewe nyakenye okukhona kubo abangu-85 abamhlophe nabangu-10 abamnyama. Kulo nyaka sebengu- 172 asebebulewe, abangu-158 abamnyama nabangu-14 abamhlophe.
“Kubukeka sengathi abaqhuba lobu bugebengu abavela ezifundazweni iGauteng naseMpumalanga sebegxile kakhulu esiqiwini esiseHluhluwe ngoba iningi lalabo ababoshelwa lobu bugebengu bavela kulezi zifundazwe, “kusho uCoetzee.